ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: ဤသို့ခရီးထွက်ခဲ့ရာဝယ်... (တတိယပိုင်း)
“အန်ကယ်ရေ.. ဒီအတိုင်းဆို ကျနော်တို့ ဒီဆိုင်မှာ သုံးနာရီလောက်တော့ ထိုင်နေရမယ် ထင်တယ်..”
“ဟုတ်ပါ့ ငါ့တူရာ.. အခန်းမရတော့လည်း ဒီတိုင်း ထိုင်နေရုံသာ ရှိတော့တာပေါ့”
“ကားကလည်း ဒီကိုရောက်တာ စောလွန်းပါတယ်နော် ရှစ်နာရီလောက်မှ ရောက်ရင် ရုံးဖွင့်ချိန်နဲ့ ကွက်တိလောက်ပဲ..”
“အေး.. ဟုတ်တယ်ကွ.. တကယ်ဆို ရန်ကုန်ကနေ ည ကိုးနာရီ လောက်မှ ထွက်ရင် အနေတော်လောက်ပဲကွ.. စောရောက်တော့ ဒုက္ခများတာပေါ့ကွာ..”
“ဒီလိုသာဆို ရုံးကိစ္စ ခဏခဏ လာရတဲ့သူတွေ ဒုက္ခပဲနော်..”
“ဒါပေါ့.. အန်ကယ်ဆို တစ်လကို အနည်းဆုံး သုံးခေါက် လောက်တော့ လာရတယ်ကွ.. အန်ကယ်တို့ ကုမ္ပဏီက သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် လုပ်တာဆိုတော့ ဒီက ကုန်သွယ်ရေးကို ခဏခဏ လာနေရရောပေါ့ကွာ”
“ငါတူ အရှေ့မှာ ကွေ့မယ်.. ကွေ့မယ်.. ညာဘက်ကွေ့ဝင်.. ကုန်သွယ်ရေး ရောက်ပြီ..”
“ရောက်ပြီလား အန်ကယ်.. ဆိုင်းဘုတ် မတွေ့ပါလား.. ခုဏ ဌာနတွေတော့ ဆိုင်းဘုတ် အကြီးကြီးတွေနဲ့..”
“အေးကွ.. ဒါက နောက်ဖေး ပေါက်လေ..”
“ဗျာ.. ကုန်သွယ်ရေးက နောက်ဖေးပေါက် ရှိတာလား..”
“အဟေး.. ဟုတ်တယ်ကွ ကုန်သွယ်ရေးဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း နောက်ဖေးပေါက်လေး နဲ့မှအဆင်ပြေမှာကွ..”
“ဟိုးရှေ့နား နည်းနည်းထပ်သွားလိုက်ရင်တော့ ပင်မဝင်ပေါက်ကြီး ရှိတယ်ကွ.. သိတ်တော့ မသုံးကြဘူးကွ.. ကုမ္ပဏီကိစ္စ လာတဲ့လူတွေအားလုံး နောက်ဖေးပေါက်ကပဲ ဝင်ကြတာလေ.. ဒို့လည်း ဒီကသာ ဝင်ကြစို့..”
“အော်.. ဒီလိုလား.. ဟဟား.. ဒီနားရပ်လိုက်မယ်နော် အန်ကယ်..”
အချိန် 6:21 PM
ဟဲဟဲ ကိုရင်နော်တို့ကတော့ စလာပြီ :P
နောက်ဖေးပေါက်ကြီး ဆိုတာက အိမ်ရှေ့ပေါက်ကလေး မဟုတ်တာပေါ့ကွယ်.. အဲငှယ်....
ဒါနဲ့.. နောက်တစ်ပိုင်းဆိုရင် အပိုင်းလေး... အပေး..အပေး.. အဲ.......အပိုင်း( ၄ ) ရောက်ပြီပေါ့နော်....
ဇာတ်ရှိန်တက်နေပြီ.. ဒန်..ဒန့်.. ဒန်..
ကောင်းတယ်ဗျာ နောက်ဖေးပေါက် ဆက်လက် စောင့်မျှော်လျက်ပါ
ဗျို့..ကိုရင်.. ကျနော် သမိုင်းလမ်းဆုံက လှည့်ပြန်သွားတယ်ဗျာ..နော်။
အပိုင်း၅ ကို အကြာကြီး ရေးမနေနဲ့ဦး .. မခင်လေးရေ ကိုရင်တို့ကတော့ အချိန်ဆွဲနေပြီ.. နဲနဲ ပြောပေးပါဦး
လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီကော ကောင်းခန်းရောက်ပြီဆို ဒီလိုချည်းပဲ.
waiting for part 4!!!!!!
နေပြည်တော် မရောက်ဖူးတော့ မျက်စိထဲ မမြင်ဘူးဗျာ ဓါတ်ပုံတွေ ရှိရင် တင်ပေးပါလား :)
ဦးနော် ဟီးးးးးးး သားသား မသိလို့ မေးတာ နောက်ဖေးပေါက်ဆိုတာ ဘာရယ်ဟင်.........
အနောက်က ပတ်ဝင်လို့ ရတယ်ပေါ့ ဂီလိုလားးးးးးးးး
တတိယပိုင်းကို နောက်ဆုံးပိုင်းဖတ်ပြီမှ လာဖတ်ဖြစ်တယ်
ရေးထားတာထိတယ်ဗျို့ နောက်ဖေးပေါက် :P